नयाँ वर्ष २०१९ : कुन राशीका व्यक्तिको वैवाहिक जीवन कस्तो ? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नयाँ वर्ष २०१९ : कुन राशीका व्यक्तिको वैवाहिक जीवन कस्तो ?
काठमाडौँ । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१९ सुरु भएको छ। यो वर्षमा पति पत्नीको वैवाहिक सम्बन्ध निकै राम्रो रहनेछ। ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माका अनुसार केही व्यक्तिको वैवाहिक जीवनमा समस्या पनि आउन सक्छ भने केही व्यक्तिको वैवाहिक जीवन सुखद रहनेछ। आउनुहोस् आज हामी तपाईलाई २०१९ मा राशी अनुसार तपाईको वैवाहिक जीवन कस्तो रहनेछ भन्ने बारे जानकारी दिदैछौँ। यो राशिफल चन्द्र राशीका अधारमा तपाई पारिएको हो।
मेष राशिः वैवाहिक जीवनको मामिलामा यो वर्ष तपाईका लागि निकै राम्रो छ। सम्बन्धमा उताब चढाब आउन सक्छ। केही महत्वपूर्ण कुरालाई लिएर पति पत्नीबीच तनाव बढ्न सक्छ। पुराना कुरामा उल्झन बढ्न सक्छ।
वृष राशिः पति पत्नीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। वैवाहिक जीवनका लागि यो वर्ष निकै महत्वपूर्ण रहनेछ। पुराना विवाद सुल्झन सक्नेछन्। सोच विचार गरेर मात्र वैवाहिक जीवनको कुनै पनि फैसला लिनु पर्नेछ। जीवन साथीको सहयोगमा यो वर्ष धन लाभ हुन सक्छ।
मिथुन राशिः यो वर्षको सुरुवातमा जीवनसाथीसँग सनमुटाव हुने योग छ। तर चाडै नै सम्बन्ध सामान्य बन्नेछ। यस राशिका व्यक्तिको कुनैसँग प्रेमसम्बन्ध छ भने एक अर्कालाई झनै नजिकबाट बुझने मौका मिल्नेछ।
कर्कटः विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सन्तान प्राप्ती हुनसक्ने योग छ। सन्तानसम्बन्धी समस्या हटेर जानेछन्। तपाईको इच्छा पुरा हुनेछ। पति पत्नीको सम्बन्ध बलियो बन्नेछ। कुनै गलत विचार पनि आउन सक्नेछन्, त्यसको पछाडि नलाग्नु राम्रो हुनेछ।
सिंहः तपाईले आफूले भनेको कुरा पुरा गर्न नपाउन अपमानित भएको महशुस गर्न सक्नुहुनेछ। यो वर्ष तपाईको सन्तानका लागि निकै शुभ छ। सन्तानसम्बन्धी समस्या हट्नेछ। कयौँ मामिलामा जीवन साथीको सहयोग प्राप्त नहुन सक्नेछ।
कन्याः कामको बढी चापका कारण जीवनसाथीलाई समय दिन पाउनुहुनेछैन। यसको असर तपाईको दाम्पत्य जीवनमा पर्न सक्छ। जुन व्यक्तिले नयाँ वैवाहिक जीवनको सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ त्यसका लागि निकै राम्रो समय छ।
तुला राशिः पति पत्नी एक अर्काका लागि समय निकाल्न सक्नेछन्। पुराना मतभेद र गलत आशंका हट्ने छन्। सम्बन्धमा मधुरता आउनेछ। अविवाहित व्यक्तिको विवाह हुने योग छ।
वृश्चिकः जीवन साथीको भावना सम्झने प्रयास गर्नुहोस्। यस वर्ष तपाई दाम्पत्य जीवन बलियो बनाउने प्रयासमा हुनुहुनेछ र कतिसम्म सफल पनि रहनुहुनेछ। धेरै जसो समय लभ लाइफका लागि राम्रो रहनेछ।
धनुः यो वर्षको पहिलो महिनामा पति पत्नीबीच विवाद हुन सक्नेछ। कुनै पुरानो कुराले तपाईको सम्बन्धमा तनाव बढाउन सक्नेछ। जनवरीदेखि सम्बन्धमा केही सुधार आउनेछ।
मकरः रामान्समा नयाँ मोड आउनेछ। नयाँ प्रेमकथा सुरु हुनेछ। जीवन साथीको मुड ठिक हुनेछ र तपाईलाई प्रेम पनि मिल्नेछ। एक अर्काको सहयोगले समस्या समाधान गर्न सकिनेछ।
कुम्भः तपाईले जे चाहनु भएको छ त्यो प्राप्त गर्नुभयो भने प्रसन्नता हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा खुसी आउनेछ। केही राम्रो खबर पनि तपाईलाई प्राप्त हुनेछ।
मीनः मीन राशीका लागि २०१९ दाम्पत्य जीवनका लागि राम्रो छ। तर केही कुरालाई लिएर जीवन साथीसँग विवाद हुन सक्नेछ। जुन कुनै गोप्य कुरा आफ्नो जीवन साथीलाई जानकारी गराउनु राम्रो मानिनेछ। जीवनसाथीबाट धेरै जसो तपाईलाई मानसिक सहयोग प्राप्त हुनेछ।